टेलिकमको मोवाइल रिचार्ज हुँदैन ? यी उपाय अपनाउनुस्, | Hulaki Online
टेलिकमको मोवाइल रिचार्ज हुँदैन ? यी उपाय अपनाउनुस्,
पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमको मोवाइल रिचार्ज नभएर उपभोक्ता हैरान छन् । टेलिकमले एक घण्टामा ९० हजार जनाले रिचार्जको प्रयास गर्ने भएकाले सिस्टम बिजी हुँदा रिचार्ज नहुने गरेको बताउने गरेको छ ।
लोडसेडिङका कारण बिटिएस टावरले पनि राम्रोसँग काम गरेका छैनन् । ‘बिटिएसमा राखिएका ब्याट्री चार्ज हुने भनेकै रातिको समयमा हो, दिउँसो बत्ती नै हुँदैन त्यसले समस्या भइरहेको छ,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्ली अधिकारीले भने, ‘सबै ठाउँमा सोलार राख्न पनि संभव छैन, टेलिकमको सेवाको स्तर कमजोर हुनुको कारण लोडसेडिङ प्रमुख हो ।’
कसरी गर्न सकिन्छ त सजिलै रिचार्ज रु तपाईं पनि रिचार्ज कार्ड कोट्याएर पिन नम्बर डायल गर्दा हैरान हुनुभएको छ भने नेपाल टेलिकमले दिएको यि तरिकाहरु अपनाउनुस चाँडै हुन्छ रिचार्ज ।
टेलिकमले रिचार्ज गर्न सजिला तीनवटा विकल्प दिएको छ । पहिलो युएसएसडी प्रविधिस् जस अनुसार एस्ट्रिक ४११ वा ४१२ एस्ट्रिक पिन कोड र अन्तिमम ह्यास डायल गरी रिचार्ज गर्न सक्नुहनेछ ।
दोस्रो आइभिआर प्रविधिः जसबाट तपाईंले टेलिकमले तोकेका नम्बरहरु ९जस्तै १४१४, १४१५, १४१३० डायल गरी प्राप्त निर्देशन हनुसार रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ ।
तेस्रो वेभ रिचार्जः रिचार्ज नभएर हैरान हुनुभएको छ भने हालै मात्र नेपाल टेलिकमले वेभ रिचार्ज सिस्टम ल्याएको छ । यो प्रविधिवाट टेलिकमका सवै सेवाको रिचार्ज गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि अनुसार लगइन गरेर आफूले चाहेको सेवा छनौट गरि रिचार्ज गर्न सकिनेछ । वेभ रिचार्ज प्रविधि अहिलेको सवैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । जसबाट तपाईंले एकपटक भन्दा धेरै रिचार्ज पिन नम्बर हालिरहनु पर्दैन ।
नेपाल टेलिकमका जिएसएम प्रिपेड, जिएसएम पोस्पेड, सिडिएमए प्रिपेड, सिडिएमए पोस्पेड, ल्याण्डलाइन फोन, एसआरपी, एडिएसएल अनलिमिटेड, एडिएसएल भोल्युम वेस्ड र वाइम्याक्स सेवामा वेभ रिचार्ज प्रविधिबाट रिचार्ज गर्न सकिनेछ ।
यसबाहेक मोवाइल एप, एमपिओएस इसेवा टपअप र विभिन्न बैंकले आफ्ना ग्रहकलाई लक्षित गरि ल्याएको इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज कार्ड इआरसि मार्फत पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ ।